Chii chinonzi Email Authentication? SPF, DKIM, uye DMARC Inotsanangurwa | Martech Zone
Chii chinonzi Email Authentication? SPF, DKIM, uye DMARC Inotsanangurwa
Chipiri, Zvita 21, 2021 Chipiri, Zvita 21, 2021 Douglas Karr
Kana isu tichishanda nevatumiri veemail hombe kana kuvaendesa kune itsva email service provider (kunyanya), kuendesa email kwakakosha mukutsvaga mashandiro eemail kushambadzira kwavo kuedza. Ndakashora indasitiri kare (uye ndinoenderera mberi) nekuti mvumo yeemail iri kudivi risiri iro reequation. Kana internet service provider (ISPs) vanoshuvira kuchengetedza inbox yako kubva kuSPAM, saka ivo vanofanirwa kunge vachigadzirisa Permissions kuti uwane iwo maemail mubhokisi rako rekutumira. Pane kudaro, maISPs anovimba nemaalgorithms anopedzisira achivharira email yakanaka uye kazhinji achirega spam kuburikidza chero zvakadaro.
Ndiro kadhi ratakaitwa muindasitiri, zvakadaro, saka tinofanira kutora matanho ekuzvidzivirira. Makambani kazhinji haatomboite chero mhando yekuisa inbox yekutarisa kana mukurumbira wekutarisa pane yavo email yekushambadzira zvirongwa uye anoshamisika kana isu tichimhanyisa mimwe bvunzo toona kuti chikamu chikuru chemaemail avari kutumira (uye kubhadhara) vari kuwana. yakakandwa mudura remarara.
Pamusoro pezvo, isu tinowanzo kuwana email yechokwadi yakamisikidzwa kune yavo yekutanga email yekushambadzira sevhisi… asi ivo vane boka remamwe masisitimu anotumira mameseji asiri iwo. Kambani inogona kunge iine yavo email platform, email marketing platform, invoicing platform, web site fomu mhinduro, uye toni yemamwe masisitimu ari kutumira email kuvashandi nevatengi. Handikwanise kukuudza kuti kangani patinonzwa, "Wakatarisa spam yako folda?" semhinduro. Kana iwe uchifanira kutarisa yako spam folda… iwe unogona kunge uine email yechokwadi nyaya uye unofanira gadzirisa email yako kuburitsa.
Chii chinonzi Email Kusimbiswa?
Kutumirwa neemail ndiyo maitiro evanopa internet sevhisi (ISPs) vanoona kuti maemail anonyatso kubva kune anotumira akakodzera. Inosimbisa kuti iyo email meseji pachayo haina kushandurwa, kubiwa kana kuumbika parwendo rwayo kubva kunobva kune iye mutengi. Emails ayo asina kusimbiswa anowanzopedzisira ave mune yekugamuchira spam folda. Kutumirwa neemail kunosimudzira kugona kwako kuita kuti maemail ako aendeswe kubhokisi rekuyera kwete iyo junk folda.
Pane mashoma maprotocol anoda kuitwa pese paunenge uchitumira email panzvimbo yedomeini yako kubva papuratifomu yechitatu:
Sender Policy Sisitimu (SPF) - email yekusimbisa protocol yakagadzirirwa kuona kuumba yekutumira domain kubva kune isina kutenderwa kutumira sevhisi kana IP kero panguva yekutumira email.
DomainKeys Inozivikanwa Tsamba (DKIM) - email yekusimbisa protocol inobvumira mugamuchiri kuti atarise kuti email inonzi yakabva kune imwe nzvimbo yakatenderwa nemuridzi wenzvimbo iyoyo.
Domain-yakavakirwa Meseji Kusimbiswa, Kuzivisa uye Kuenderana (DMARC) - email yekusimbisa protocol yakagadzirirwa kupa varidzi veemail domain kugona kuchengetedza dura ravo kubva kukushandiswa kusingatenderwe.
Kuvimbiswa neemail hakungovimbisi chete kuti munhu asina kutenderwa haasi kutumira mameseji achinyepedzera kunge ndiwe (spoofing), inovawo nechokwadi chekuti ISP inogona kusimbisa mutumi pamwe neshoko. Chokwadi, zvakapesana ndezvechokwadi zvakare. Pasina email yechokwadi, ISP inogona kufunga kuti uri spammer kana spoofer uye vanogona kutumira email yako kune spam folda, kana kutoramba email yako zvachose.
Kuve nechokwadi unacho DKIM, DMARC uye SPF zvinyorwa kutumirwa nemazvo kunogona kunatsiridza yako yekuisa inbox - zvichikonzera zvakananga mune rimwe bhizinesi. NeGmail chete, unogona kuve mutsauko pakati pekuiswa kwe0% mubhokisi re inbox uye ne 100% yekuiswa mubhokisi re inbox!
Iyi infographic kubva InboxAlly inotsanangura SPF, DKIM, uye DMARC. InboxAlly ipuratifomu inoshandiswa nevatumwa vane mvumo inodzidzisa vanopa maemail kuti vaise mameseji ako muInbox (uye vachengetedze kunze kwe spam uye maforodha ekukwidziridzwa) zvinoreva kuwedzera kunoshamisa kune yako yakavhurika mitengo uye yako yepasi mutsara.
Tags: authenticationkuburitswadkimDMARCemail kusimbiswaemail kuburitswainbox kuiswajunk firitaspamspf
Shopify: Maitiro Ekuronga Dynamic Theme Mazita uye Meta Tsananguro yeSEO uchishandisa Liquid